လက္​ထပ္​ထိမ္​းျမႇားျခင္​း — Steemit
ပဲလက်ထပ်သူကိုလူတိုင်းကအကြောင်း psyche ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့အစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့်အတူပေါ်စတင်ဖွင့်အသစ်တစ်ခုကိုစွန့်စားမှုပါပဲ။ အနှစ် 50 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအိမ်ထောင်သက်ခဲ့သူကိုလူတိုင်းကအကြောင်း psyche ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကအဲဒါကိုလုံးဝတန်ဖိုးရှိခရီးစဉ်, န့်, သူတို့ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူနေထိုင်နေကြပါတယ်။ သို့သော်အလယ်မှာရှိလူ, သူတို့ကကောင်းကောင်း, နေ - သင်သိပါ, ​​သူတို့ကဒဏ်ငွေပါပဲ။ ထိုသို့အဖြစ်သူတို့ဖြစ်ကောင်းအတော်လေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသလောက်အလုပ်ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါကလေးထိန်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်, ဒါပေမယ့်ပျော်စရာဖြစ်လို့ယူဆတယ်သောအစိတ်အပိုင်းများ, အ Talk, အဆိုပါစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသည်တစ်ဦးခြေထောက်ကျော်နဲ့ပေါက်မယ့်။
သူတို့ကပိုသဘာဝကပိုမိုလွယ်ကူခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သညျ။ အတူတကွနေဝင်ချိန်သို့ချွတ်လမ်းလျှောက် ပတ်သက်. အရာထို့နောက်မိုက်မဲရရှိသွားတဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျနှငျ့သငျအချင်းချင်းကျော်ထိ မိ. လဲစရာပါတယ်။ အသစ်နှစ်ခုစာအုပ်တွေခင်ပွန်း-and ဇနီးအိမ်ထောင်ရေးပညာတတ်များ Suzanne Pileggi Pawelski နဲ့ James Pawelski အသုံးပြုပုံအတူတကွဆန်ဖရန်စစ္စကိုလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဖနီက de Marneffe နှင့်မင်္ဂလာအသုံးပြုပုံဒီလယ်ပိုင်းဘဝအိမ်ထောင်ရေး ennui, ကြမ်းတမ်း Patch ဖြေရှင်းရန်။
(ဒုတိယခုနစ်ခုအချိန်သတို့သားလာရီမင်းကြီးသည်ထက်မနည်းတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြား Champ ကနေထောက်ခံချက်နှင့်အတူကြွလာ။ ) အဆိုပါ midlife အကျပ်အတည်းသက်တမ်းသုတေသနအတွက်နည်းနည်းထောက်ခံမှုနှင့်အတူသင်တန်းဟောင်းcliché, ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကပယ်ချသည့်အခါ "ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ကျနော်တို့နှင့်အတူပန်းချုပ်ကစားနည်းနေသောတပ်ဖွဲ့များများ၏ပြင်းထန်မှုလက်နက်ချဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်" အဘယ်သူ၏ယခင်စာအုပ်မိခင်က de Marneffe ကပြောပါတယ် အလိုဆန္ဒမိခင်များ wrestle ရာနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင် Impulses သတင်းပို့မှာကြည့်ရှုကြ၏။
"အသက်၏အလယ်ပိုင်းကိုနောက်ဆုံးမှာသူတို့အလုပ်မဖြစ်ကြဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုမှုမှပြင်ပဖြေရှင်းချက်ရှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drive ကိုအကြားအလုပျသပဋိပက္ခ၏ယခုအချိန်တွင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ " ဒါဟာမကြာခဏလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇွဲစိတ်ပျက်ဟန်ရှိရာအမှတ်, နှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖွင့် ကျနော်တို့တိရစ်ဆာနျစတင်ရှေးခယျြခဲ့သောငါတို့သည်ဖြစ်ကြပြီးအဘယ်သူကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧကန်၏ selvages ။
လက်ထပ်ခံရခြင်း၏လုပျငနျး, Argo တစ်ခုအော်စကာလက်ခံစဉ်ဘန်အက်ဖလက်ဒါမှတ်သားစဖွယ်ဓိပ်ပာအဖြစ်တစ်ဦးရန်လိုလူမျိုးထဲတွင်ရုပ်ရှင်အောင်ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းမှုတွေအများကြီး, အပေးအယူတွေအများကြီးနှင့်တိုးတက်မှုမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်ရာမှာအမှတ်ရှိတယ်။ သငျသညျကိုဘယ်လို unstuck ရပါသလဲ? မင်္ဂလာအတူတကွရဲ့သူတို့ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်လက်တွေ့သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုမစောင့်, အချစ်ဇာတ်လမ်းမှအပြုသဘောစိတ်ပညာ၏အခြေခံမူလျှောက်ထားရန်ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းဆိုသူကို Co-စာရေးဆရာများ။ (သူတို့ကတောင်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကိုပူဇော်။ ) မည်သို့တဦးတည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်း ပတ်သက်. အပြုသဘောပေါ်လွင်သနည်း? "အဆောက်အဦးများနှင့်ထပ်တိုး" က - သင်တိုဘဝတိုးချဲ့အတူတကွ-နှင့် "ကျရှညျနဲ့အားပေး," တစ်ဦးခေါင်းလျှော်ရည်ကိုစီးပွားဖြစ်တူသောအသံပေးသော, ဒါပေမယ့်ခံစားချက်တွေကိုအဘို့အနှေးကွေးအစားအစာလှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုး, သင်ရှိသည်ကောင်းသောအရာကိုမြည်းစမ်းခြင်းအကြောင်းပါ။ ဒီထဲကတချို့ဟာ, သင်တန်း, သဘောထားညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။ ပြည်သူ့စိတ်ခံစားမှုကူးစက်တတ်ကြသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်, non-downer မှလက်ထပ်ခံရဖို့ပိုနှစ်သက်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု "အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဦးစားပေး" ရန်အလို့ငှာ, ငါတို့စာဖတ်သူတွေကိုရန်အကြံပြုကြသည် "အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုများကြုံနေရသဘာဝဖြစ်ပေါ်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလစီစဉ်။ " ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းအချိန်ဇယားအမှုအရာသည် ဝမ်းမြောက်သောစိတ်။ ဒီသိသာနှင့်အကူအညီမရပါနှစ်ဦးစလုံးပုံရသည်နေစဉ်ပျော်စရာတစ်ခုတည်းလူများအတွက်သီးသန့် reserved တစ်ဦးဇုန်ဖြစ်ဟန်ကတည်းက, ကရှည်ရှည်လျားတစီးကိုအဘို့အထဲတွင်စုံတွဲများဆိတ်ကွယ်ရာလုပ်ဖို့အတူတူနှင့်အသစ်သောအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့အသစ်သောအမှုအရာကိုရှာဖွေသင့်ကြောင်းတစ်အိမ်ထောင်ရေးသစ်အယ်သီးဖြစ်ပါတယ်။ positive စိတ်ပညာထပ်မံကြိုးစားရန်စုံတွဲများကျု့ံအံ့သောငှါ၎င်းအတွေးအခေါ်နှင့်အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးထားပါတယ်။ ယင်း၏စာရေးသူကရေးသားနိုငျသောကွောငျ့ 'ဆိုတဲ့ Pawelskis ကျော်တစ်ဦးမတရားအားသာချက်ရှိပါတယ်ရာ de Marneffe ရဲ့စာအုပ်, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပိုမိုမြင့်မား-therapized သောလေထုထဲတွင်တည်ရှိသည်။ သူမသည်လည်းသူမကခံစားချက်-နှင့်အတူ-and စဉ်းစားတွေးခေါ်-အကြောင်းကိုခေါ်ဆိုသော Two-pronged ချဉ်းကပ်မှု, ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုအိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေလိုအပ်ပါတယ်သူမကဆိုပါတယ်, စာနာခြင်းနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကလေးတစ်ဦးတစ်ခြစ်နှင့်အတူအိမ်ပြန်လာသည့်အခါကောင်းသောမိဘများရုံညည်းစာနာမကျင့်။ မဟုတ်သလိုသူတို့ပဲလွှဲခြင်းနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများအတွက်ရောက်ရှိကြဘူး။ သူတို့ကတဦးတည်း, ပြီးတော့အခြားလုပ်ပါ။ ထိုနည်းတူဆက်ဆံရေးမိတ်ဖက်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတည်ရှိမှုနှင့်ခံစားချက်များကိုနှင့်မငြိမ်းအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့သူတို့ကိုတိုးတက်လာဖို့ရှာအံ့သောငှါနိုငျသောအခါရှင်သန်။ , သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဟုတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက် "ငါပဲသင်ကူညီ, မနားမထောငျခငျြ," သူတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသနိုင်ပါတယ်တစ်ဝက်နည်းလမ်းကသူတို့ကိုမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအိပ်ရာသင့်ရဲ့အဆုံးကိုတက်ကျင်းပရန်: နောက်ဆုံးတွင်စာအုပ်တွေနှစ်ဦးစလုံးသဘောတူတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားညာဘက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလူတိုင်းရဲ့အနည်းဆုံးအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ အဆိုပါ Pawelskis တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်အရမ်းလေးစားမိပါတယ်နိုင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကမှလက်ထပ်ရမည်ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ဘယ်သူကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်, ဇာတ်ကောင်ပွုစုပြိုးထောအပေါ်တစ်ဝက်ကသူတို့ရဲ့စာအုပ်ဖြုန်း: "။ ကျေနပ်ဆက်ဆံရေးတက်ကြွသီလမလိုအပ်, ကြှနျုပျတို့ပြုမူသင့်တယ်ဘယ်လိုမမျှသာသီအိုရီအသိပညာ" ကြောင်းမြတ်သောပေမယ် bewilderingly ဝိုးတဝါးအသံတော်မူသောအဘို့သူတို့အဘို့, က de Marneffe ရှင်းလင်းချက်တက်ပေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒီမှာအလုပ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်အထဲတွင်ရဲ့ "စစ်မှန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အားနည်းချက် facing ။ " သူမဟာလိင်, ငွေ, အရက်သောက်, အလောင်းတွေ, အလိုဆန္ဒများ, မြေတပြင်လုံးရှုပ်ထွေးအကြောင်းကို unflinching ပြောဆိုမှုများရှိသည်ဖို့, အခြေချမသူမရဲ့လူနာအားပေးထားသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားပျေါတှငျသုတေသနတလမ်းတည်းဖြင့်ထောက်ပြ: ဖိနှိပ်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ အဟောင်းတွေကြီးထွားလာ၏တစ်ခုတည်းသောအားသာချက် သာ. ကြီးမြတ် Self-အသိပညာသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်ကြောင့် growin အောက်ပါအတိုင်း
pell laathtaut suu ko luutine kaaakyaungg psyche hpyitpartaal . darhar suuthoetahcain aamyaell suuthoetrae aakaunggsone matesway nhaint aatuu paw hcatain hpw int aasaittaithku ko hcw n hcarrmhu parpell . aanhait 50 shoetmahote hto htaat po aainhtaungsaat hkaesuu ko luutine kaaakyaungg psyche hpyitpartaal . suuthoet k aelldarko lonew taanhpoeshi hkareehcain, ant, suuthoetrae aasaataakyeesone aasway hkainpwann nhang aatuu nayhtine naykyapartaal . shoetsaw aalaalmhar shi luu, suuthoet k kaunggkaungg, nay - sain si par, ​​ suuthoet k danngway parpell . htoshoet aahpyit suuthoet hpyitkaungg aatawlayy laathtaut htaim myarr salout aalotehpyit raan myahaaw laint htarr hkaeparbhuu . aasopar kalayy htein nhaint nayrar htine hkainn hteinsaimrayy nhaint upadaykyammyarr payysaung, darpaymaae pyawhcarar hpyitlhoet yuusataal saw aahcateaapinemyarr,aTalk, aasopar hcemankein rayyswalhkyinn sai tait u hkyayhtout kyawnae pout m ae . suuthoet k po sabharw k pomo lwalkuu hkanhcarrr maallhoet yonekyi hphoet u saunghkae s nyya . aatuutakw naywainhkyane shoet hkyawatlamshout paatsaat.arar hthoetnout mite mell rashiswarrtae saw kwayarngya hpwhcyasanyya nhangya s ngya aahkyinnhkyinn kyawhti mi. lell hcarar partaal . aasait nhaithku hcaraotetway hkainpwann-and janee aainhtaungrayypanyartaatmyarr Suzanne Pileggi Pawelski nae James Pawelski aasonepyupone aatuutakw saanhparaanhcahchcako laattwae hcatepanyarshin hp nek de Marneffe nhaint main g lar aasonepyupone de laalpine bhawaaainhtaungrayy ennui, kyamtam Patch hpyayshinnraan . ( dutiy hkunait hku aahkyane sathoetsarr lar re mainnkyee sai htaatmanaee tait u laathtaut htaimmyarr Champ k nay htouthkanhkyet nhaint aatuu kyaw lar . ) aasopar midlife aakyautaataee saattam sutaysan aatwat naeenaee htouthkanmhu nhaint aatuu saintaann haunggcliché, hpyittaal, darpaymae kyanawthoet k paalhkya saeetaahkar " kyanawthoet k takaaltot kyanawthoet nhaint aatuu paann hkyaote kahcarrnaee naysaw tauthpwalmyarr myarreat pyinnhtaanmhu laatnaathkyahphoet kyaoehcarr naykyataal"abhaal suueat yahkain hcaraote mihkaink de Marneffe kapyawwpartaalalo sandamihkainmyarr wrestle rar nhaint aatuu yhainpyaine Impulses satainnphoet mhar kyany shu kyaeat . " aasaat eat aalaalpine ko noutsonemhar suuthoet aalotemahpyit kya bhuu kyawantawthoetrae hcatepinesinerar pyaဿnarmyarr nhaint kyawanotethoeteat aasiaamhaatpyumhu mha pyinp hpyayshinnhkyet sharkyawantawthoetrae drive koakyarralu pya s patipakhk eat yahkuaahkyanetwin ko kohcarrpyutaal . " darhar makyaarhkan laee kyawantawthoetrae jwal hcatepyet haan shirar aamhaat, nhang sautsautrautraut hpwin kyanawthoet tiraitsarnya hcatain shayy hk yyaya hkaesaw ngarthoetsai hpyitkya pyeeabhaalsuuko aakyaunggko kyawantawthoetrae ekaaneat selvages . laathtaut hkanrahkyinn eat lupyanganya, Argo taithku aawhcakar laathkan hcain bhaan aaat hp laat dar mhaatsarr hcahpwal dhiut par aahpyit tait u raan lo luumyoe htelltwin roteshin aaung kaeshoet hpyitninepartaal . nyhainhainemhutway aamyarrkyee, aapayyaayuu twayaamyarrkyee nhaint toetaatmhu mahpyitnine pone rasai rarmhar aamhaat shitaal . s ngya s nyya kobhaallo unstuck r parsalell? main g lar aatuutakw rae suuthoet roeshinntae nhaint laattwae suuthoetrae aakyaannyarn ko m hcawng, aahkyitjaratlam mha aapyusabhaw hcatepanyar eat aahkyayhkanmuu shouthtarr raan pahtam u sone hcaraote hpyitpartaal taunggso suuko Co- hcarrayysararmyarr . ( suuthoet k taung nyarnhcam pahayli myarrko puujaw . ) maishoet t u taee laathtaut htaim myarr kaeshoetsawaahpwalaahcaee paatsaat. aapyusabhaw pawlwin sanaee? " aasouta u myarr nhaint htauttoe" k - sain to bhaw toehkyaae aatuutakw-nhaint " kya shnyya nae aarrpayy," tait u hkaungg shaw rai ko hceepwarrhpyit tuusaw aasan payysaw, darpaymaae hkanhcarrhkyettwaykoabhhoetanhaayykway aahcarraahcar lhuutsharrmhu taitmyoe, sain shisai kaunggsaw aararko myi hcam hkyinn aakyaungg par . de htellk tahkyahoethar, saintaann, sabhawhtarr nyhainhainemhu loaautsai . pyishu hcatehkanhcarrmhu kuuhcaat taat kyasai taithcatetaitpine hpyitsaw kyawwng, non-downer mha laathtaut hkanr hphoet po nhaitsaat . de hkyain kaut mhu eat aadhik aahcateaapinetaithku " aapyusabhawsaungtae hcatehkanhcarrmhu u hcarr payy" raan aalhoetnghar, ngarthoet hcarhpaatsuutway ko raan aakyaanpyukyasai " aapyusabhawsaungtae hcatehkanhcarrmhu myarr kyuannayr sabharw hpyitpaw hphoet po myarrpartaal kyaungg naeelamtway htellmhar ngarthoet nayrasaw naeraat karl hcehcain . " kyawantawthoet ko saunghkae mai aakyaungg aahkyanejayarramhuararsai wammyawwat saw hcate . de sisar nhaint aakuuaanye marapar nhait u hc lone pone rasai nayhcain pyawhcarar taithkutaee luu myarraatwat seesaant reserved tait u jone hpyit haan kataeek, k shi shilyarr tahceekoabhhoetahtelltwin hconetwalmyarr sate kwal rar lotehphoet aatuutuu nhaint aasait sawarar thoetko lotehphoet aasait sawamhu aararko sharhpway saint kyaungg tait aainhtaungrayy sait aaal see hpyitpartaal . positive hcatepanyar htautman kyaoehcarr raan hconetwalmyarr kyau an aan saw nghaar ၎inn aatwayaahkaw nhaint aarronekyaww kyawwhtoutnouthkan pyu payyhtarrpartaal . yainneat hcarrayysuuk rayysarr nongya sawkwayarngya 'sotae Pawelskis kyaw tait u matararr aarrsarhkyet shipartaalrar de Marneffe rae hcaraote, saanhparaanhcahchcako pomo myint marr-therapized saw layhtu htelltwin taishisai . suu m sailaee suumak hkanhcarrhkyet- nhaint aatuu-and hcain hcarr tway hkaw- aakyaunggko hkawsosaw Two-pronged hkyain kaut mhu, payyhtarrpartaal . aasopar tonepyanmhu aainhtaunghpaat tait u hkyinn hce k tahkyarr k nay loaautpartaal suumak sopartaal, hcarnar hkyinn nhaint aahtoutaakuu hpyithcay kyaungg taithku hpyitparsai . kalayy tait u tait hkyit nhaint aatuu aainpyan lar saeet aahkar kaunggsaw mibhamyarr rone nyaee hcarnar m kyang . mahotesalo suuthoet pell lwhaell hkyinn nhaint poesaatsayy myarraatwat routshi kya bhuu . suuthoet k t u taee, pyeetot aahkyarr lote par . htonaeetuu saatsanrayy matehpaat rae tait u hkyinn hce k tahkyarr taishimhu nhaint hkanhcarrhkyetmyarrko nhang mangyaaim aasiaamhaatpyu pyeetot suuthoetko toetaatlar hphoet shar aan saw nghaar nongya sawaahkar shinsaan . , saint aainhtaunghpaat hu tuunyetae aakyaunggpyahkyetmyarraatwat " ngar pell sain kuunye, m narr m htaw ngya hk ngyaya," suuthoet hkyithkyinnmayttarko pya s ninepartaal taitwaat naeelam k suuthoetko mhu hpyitpartaal . aasopar aiutrar sang raeasone ko taat kyinnparaan: noutsonetwin hcaraotetway nhait u hc lone sabhawtuu tait u laathtaut htaim myarr nyarbhaat hphoet aakaunggsone naeelamtaithku luutine rae aanaeesone aakyaitesone parpell . aasopar Pawelskis taithcone tait u ko tait u aainhtaunghpaat aaram layyhcarrmipartaal ninepartaal taithcone tait u k mha laathtaut ramai ko kyaite lain maal bhaalsuuko puggol tait u hpyitlarraan, jaratkaung pwu hcu pyaoe htaw aapaw taitwaat k suuthoetrae hcaraote hpyuann: " . kyaaynaut saatsanrayy taatkyaw sel m loaaut, kyahanyaupyathoet pyumuu saint taal bhaallo m myahasar seaore aasipanyar" kyaungg myatsaw paymaal bewilderingly woetawarr aasan taw muu sawabhhoet suuthoetabhhoet, k de Marneffe shinnlainnhkyet taat payyhtarrpartaal . hotepartaal, aelldemhar aalote rae, darpaymaaeahtelltwinrae " hcaitmhaan hcatelhuutsharrmhu nhaintaarrnaeehkyet facing . " suu mahar liin, ngway, aaraatsout, aalaunggtway,alo sandamyarr, myay t pyin lone shotehtwayaakyaunggko unflinching pyawwsomhumyarr shisai hphoet, aahkyayhkya m suumarae luunar aarr payyhtarrsai . laathtaut htaim myarr pyaaw thangya sutaysan t lam taee hpyang htoutpya: hpinhaiutmhu hcatelhuutsharrmhu ko hceman hkaant hkwal hphoet aakaunggsone naeelamtaithku bhaaltotmha hpyitpartaal . aahaunggtway kyeehtwarrlar eat taithkutaeesawaarrsarhkyet sar. kyeemyat Self- aasipanyar sai sopar k, hthoetnoutkyount growin aoutparaatine